Nahazo $ 10.7 tapitrisa $ avy amin'ny Tahiry Fampandrosoana Afrikanina i São Tomé sy Príncipe
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Sao Tome sy Principe Breaking News » Nahazo $ 10.7 tapitrisa $ avy amin'ny Tahiry Fampandrosoana Afrikanina i São Tomé sy Príncipe
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Sao Tome sy Principe Breaking News • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny African Development Fund dia nanolotra fanomezana $ 10.7 tapitrisa hanohanana ireo SME amin'ny fambolena sy fizahantany any São Tomé sy Príncipe.
Ny tetik'asa dia mikendry ny hanatsara ny tontolon'ny orinasa amin'ny alàlan'ny fanesorana ny tavoahangy manokana izay manakana ny fitomboan'ny tarika tsy miankina.
Hanamafy ny fahafaha-manao sy ny fidirana amin'ny tsena ary ny trosa ho an'ny orinasa kely sy salantsalany (SME) amin'ny alàlan'ny fiofanana momba ny fampandrosoana teknika sy orinasa ny tetikasa.
Ny firenena dia manana tanjaka lehibe amin'ny fambolena, serivisy, ao anatin'izany ny fizahan-tany sy ny toekarena manga, sehatra izay maneho maherin'ny 70% amin'ny hetsika ara-toekarena.
Ny filankevi-pitantanana ny Tahiry Fampandrosoana Afrikanina (ADF) nankatoavina tamin'ny Alarobia tao Abidjan, fanomezana $ 10.7 tapitrisa $ ho an'i São Tomé sy Príncipe ho fampiharana ny dingana voalohany amin'ny Zuntámon Initiative, ao anatin'ny rafitry ny Lusophone Compact.
Ny tetik'asa dia mikendry ny hanatsara ny tontolon'ny orinasa amin'ny alàlan'ny fanesorana ny tavoahangy manokana izay manakana ny fitomboan'ny tarika tsy miankina. Hanamafy ny fahafaha-manao sy ny fidirana amin'ny tsena ary ny trosa ho an'ny orinasa kely sy salantsalany (SME) amin'ny alàlan'ny fiofanana momba ny fampandrosoana teknika sy orinasa ny tetikasa. Io dia hampitombo ny fandraisany anjara amin'ny toekarena sy ny famoronana asa ary hanangana toekarena maharitra.
Ho fanampin'ny SMEs, ity tetik'asa ity dia hahazo tombony ho an'ireo mpampiasa vola sy andrim-panohana orinasa toy ny maso ivoho momba ny varotra sy ny fampiasam-bola, ny fikambanan'ny orinasa ary ny fikambanana mpanohana ny orinasa, ny andrim-panjakana ara-bola ary ny Banky Foiben'i São Tomé sy Príncipe. Ny fampiharana ny tetikasa dia hitarika amin'ny fihenan'ny isan'ny andro hamahana ny fifanolanana ara-barotra manomboka amin'ny 1,185 ka hatramin'ny 600 andro amin'ny fanamafisana ny fahafahan'ny ivon'ny arbitration sy ny rafi-pitsarana ara-barotra, ary amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny tontolon'ny orinasa hampitombo ny isan'ny orinasa voasoratra anarana.
“Ity tetik'asa ity dia hanangana ny fahafahan'ny andrim-panjakana mitsikera ny Governemanta Sao Tome sady hanatsara ny tontolon'ny asa ho fampandrosoana ny sehatra tsy miankina. Hampiroborobo sy handrisika ny fananganana toekarena tsy ara-dalàna mba hamoronana asa bebe kokoa sy tsara kokoa, indrindra ho an'ireo vehivavy sy tanora manjaka amin'ny sehatra tsy ara-dalàna. " hoy Ramatoa Martha Phiri, Tale, Human Capital, Youth and Skills Development (AHHD).
Ny Zuntámon Initiative dia hampifantoka ny fidirany amin'ny entam-barotra izay andraisan'ny vehivavy sy ny tanora anjara mavitrika, ary koa ny vokatra fanondranana manana fambolena avo lenta toy ny kakao, voanio ary vokatra zaridaina. Ny fifantohana amin'ireo vokatra sy serivisy ireo dia mifanaraka amin'ny tetikadin'ny governemanta São Tomé sy Príncipe aorian'ny COVID-19 tetikady fanarenana ara-toekarena, izay manome laharam-pahamehana ny fanohanana ny orinasa voan'ny areti-mandringana sy ny famerenana amin'ny indostria lehibe toy ny fambolena, jono, fizahan-tany ary fandraisana vahiny.
"Taorian'ny nanohanany ny valin'ny COVID tamin'ny alàlan'ny hetsika fanohanana teti-bola ara-tantara tamin'ny taona 2020, ny Banky dia lohalaharana amin'ny fanarenana aorian'ny areti-mandringana any São Tomé sy Príncipe miaraka amin'ny fomba vaovao mamaly ireo fanamby manokana atrehin'ireo sehatra tsy miankina amin'ny kely toekarena insular, ”hoy Andriamatoa Toigo, mpitantana ny Bankin'ny Firenena ao São Tomé sy Príncipe.
Mifanaraka amin'ny Tetikasan'ny Banky ho an'ny Tanora ho an'ny tanora ny tetikasa Africa ary mamaly ny tanjon'ny Lusophone Compact amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina maharitra, ary manampy amin'ny paikadim-pampandrosoana sehatra tsy miankina amin'ny firenena 2015-2024.